Taboo – Official Party Game Cheats&Hack – Amathiphu we-Android Cheats
Yiyona engcono kunazo zonke imidlalo yamagama! Yenza iphathi yasendlini ocingweni lwakho bese udlala iTaboo ngengxoxo yevidiyo! Hlukanani phakathi 2 amaqembu bese nishintshana ukuchaza igama – ungasebenzisi igama nanoma yimaphi amagama asekhadini! Ithimba lakho kufanele liqagele amagama amaningi ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuthi isibali sikhathi siphele!
Njengo-Charades futhi Amakhanda phezulu!, I-Taboo imnandi kubantu abadala kanye nentsha. Uyichaza kanjani i-APPLE uma igama elithi RED, ISITHELO, I-PIE, I-CIDER ne-CORE zonke azivumelekile? Uma usebenzisa igama elingavumelekile ngephutha, elinye iqembu lizobhuza futhi uzolahlekelwa iphuzu! Jabulela umsindo nabangani bakho nomndeni wakho. Uhlelo lokusebenza lusebenza uma nindawonye endaweni eyodwa, noma ngokuhlukana ngengxoxo yevidiyo! I-buzzer, isibali sikhathi, amakhadi nengxoxo yevidiyo yakhelwe ngaphakathi – okudingayo ifoni yakho. Cabanga ngokushesha, khuluma ngokushesha futhi uqede umncintiswano!
– INGXOXO YEVIDIYO YASEMDLENI – Awudingi izinhlelo zokusebenza ezengeziwe noma izikrini! Dlala umdlalo ubuso nobuso 2-6 abangani, noma ngabe ukuphi!
– DLALA EGUMBENI ELILODWA – Dlala Imodi Yephathi Yasendaweni efonini eyodwa, nabadlali angenamkhawulo!
– UMDLALO ONGAKHANGISI – Zithokozise ngaphandle kwezikhangiso ezizokuphazamisa!
– INDLELA YABADLALI ABABILI – Inselelo kumngane oyedwa ngeModi Yabadlali ababili ehlukile!
– 500 AMAKHADI – Kufaka amakhadi asuka kugeyimu yoqobo!
– AMAphakethe EKHADI ENGEZIWE – Thenga amadekhi anetimu ejabulisayo ukuze ugcine igeyimu yakho iyintsha. Lokhu kuhlanganisa:
Ubumnandi & Imidlalo
…kanye namadekhi amabili e-Mystery ajabulisayo!
Qala umdlalo bese umeme abangani bakho. Noma dala iqembu lengxoxo yangaphakathi nohlelo nabangani bakho bese uqala umdlalo engxoxweni yakho!
I-Taboo ingumdlalo we 2-6 abadlali be-inthanethi, nengxoxo yevidiyo ifakiwe. Lokhu kusho ukuthi ningakwazi ukudlala ubuso nobuso ngisho nalapho ningakwazi ukuba ndawonye. Ungakwazi futhi ukudlala nabangani abaningi ngendlela othanda ngayo, Funda kuphela, nge-Local Party Mode.
Hlukana ube amaqembu amabili
Hlukanisa amaqembu amabili bese uqamba iqembu lakho.
Umnikezeli wolwazi unikezwa iThimba A
Umnikezeli wolwazi ovela eqenjini A uzokhethwa uhlelo lokusebenza. Emzuliswaneni olandelayo, onikeza ulwazi eqenjini B uzothatha ithuba lakhe.
Umnikezeli wolwazi udweba ikhadi
Umnikezeli we-Clue kuphela ovela kuThimba A, kanye nawo wonke ama-Team B, angabona ikhadi. Umnikezeli wolwazi kumele azame ukutshela iqembu lakhe ukuthi liyini igama, ngaphandle kokusho noma yiliphi igama elithi Taboo.
Ithimba B lime eduze kweBuzzer
Ithimba B lizokhuluma uma umnikezeli wolwazi esho igama elithi Taboo!
Buka isibali sikhathi
Ithimba lakho kufanele liqagele amagama amaningi ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuphela kwesikhathi. Uzowina 1 iphuzu ngokuqagela okufanele.
Ungeqa 2 amakhadi njalo. Ngemva kwalokho, elinye iqembu lizothola 1 khomba njalo uma weqa ikhadi.
Umdlalo uphela lapho wonke umdlali ethathe ithuba njengomnikezi we-Clue. Noma uma iqembu ngalinye libe nenani elilinganayo lamajika njenge-Clue-giver.
INDLELA YEQEMBU LENDAWO
Uma nonke nisendaweni eyodwa, ungadlala nabangani abaningi ngendlela othanda ngayo, usebenzisa ifoni eyodwa!
– Hlukanani phakathi 2 amaqembu
– Nishintshane ukuze nibe uMnikezeli wolwazi
– Uma unguMniki-Clue, qiniseka ukuthi ithimba lakho alikwazi ukubona isikrini
– Uma useqenjini eliphikisayo, hlala noma ume ngemuva komnikezeli wolwazi bese umemeza uma besebenzisa igama eliphikisayo
– Umnikezeli wolwazi kufanele acindezele i-buzzer
Ungakwazi futhi ukudlala nomngane oyedwa kumodi yabadlali ababili!
– Zuza uma usebenzisa igama elingavumelekile
Iba umpetha wamagama futhi ushaye isitha sakho uwedwa.
Hlanganyela futhi udlale nabangani bakho, noma ngabe ukuphi!
Isigaba: Aphambe futhi Hack noma Amathiphu Amathegi: CheatsHack, umdlalo, Official, Party, Taboo
← I-Cave Driller – Ukukopela&Hack I-Farmington: Kuhle uMyFarm endala – Ukukopela&Hack →